सन्नी लियोनी देखि प्रियंका सम्मलाई पछि पारिन् प्रियाले, यस्तो छ वास्तविकता!
एजेन्सी, हालै सोशल मीडियाकी क्वीन बनेकी प्रिया प्रकाश हरेक तर्फ छाएकी छिन् । सोशल मीडियामा एक उनको भिडियो आएको थियो । जुन भिडियो ति युवतीको थियो जसले सबैलाई मात्र २६ सेकेन्डमा आफ्नो फ्यान बनाएकी थिइन् । उक्त भिडियोले प्रिया प्रकाशलाई राता-रात सुपरस्टार बनाएको छ । प्रियाको पछिल्लो केहि दिनयता २६ सेकेन्डको भिडियो हरेक तर्फ छाएको छ जुन भिडियो उनको डेब्यू चलचित्रको एक गितको हो ।
धेरै मानिसले गुगलमा सर्च गर्दै प्रिया प्रकाशबारे जान्न चाहेका छन् । प्रियालाई गूगलमा यति धेरै सर्च गरिएको छ कि उनले नयाँ रेकर्ड नै बनाएकी छिन् । यस वर्षको शुरुवातमै सबैभन्दा धेरै सर्च प्रियालाई गरिएको छ । गूगल सर्चमा सबैभन्दा धेरै सर्च गरिने एक्ट्रेस सन्नी लियोनी, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण र कैटरीना कैफ लगायतका एक्ट्रेसलाई समेत प्रियाले पछि पारेकी छिन् । प्रिया गूगल सर्चमा नम्बर १ मा आएकी छिन् । साथै इन्स्टाग्राममा पनि प्रियालाई १.७ मिलियन भन्दा धेरै युजरले फलो गरेका छन् । एका-एक चर्चामा आएकी प्रियालाई अब चलचित्रमा कहिले देख्न पाइन्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै रहेको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४१३:४३
मिडियालाई दिइएको विवाह पार्टीमा नव-बेहुली प्रियंकाको हट अवतार, तस्विर सहित!
दिपिका-रणवीर सिंहको विवाहमा बाधक बन्दै विन डीजल!
५ दिनमा संजुले राख्यो नयाँ किर्तिमानी, यस्तो छ अहिलेसम्मको कमाई!
अजय देवगनको ‘रेड’ले ३ दिनको कमाई यति ठूलो ब्यापार ? बन्यो यो वर्षको दास्रो हिट फिल्म
पतिसँग काइलीले गरिन् यस्तो कामूक हर्कत ! भाइरल भए तस्विर ! हेर्नुहोस् तस्विरहरु
महिला सशक्तिकरणको एक पहल मालिका, यस्तो बन्यो ट्रेलर!